Foto Briten—Nke 1 (Malite n’Ọnwa Jenụwarị Ruo n’Ọnwa Ọgọst afọ 2015) | JW.ORG
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Catalan Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hungarian Igbo Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lithuanian Malay Malayalam Mam Ndebele (Zimbabwe) Nepali Ngabere Norwegian Oromo Polish Portuguese Portuguese (European) Punjabi Romanian Russian Serbian Serbian (Roman) Shona Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Thai Turkish Ukrainian Urdu Valencian Welsh Yoruba Zulu
Foto Briten—Nke 1 (Malite n’Ọnwa Jenụwarị Ruo n’Ọnwa Ọgọst afọ 2015)
Ndịàmà Jehova nọ́ na Briten na-ebufe alaka ụlọ ọrụ ha dị́ n’obodo Mil Hil dị́ na Lọndọn, gaa n’ebe dị nso na Kelmsfọd, dị́ na Eses. I si na Mil Hil gaa ebe ahụ dị ihe dị ka kilomita iri asaa. N’agbata ọnwa Jenụwarị na ọnwa Ọgọst, afọ 2015, ndị ọrụ rụrụ ụlọ ha ga-ebi, ọfis, na ebe ha ga na-adọwa ngwá ọrụ tupu ọrụ ebiri ọkụ.
Ihe ndị a rụrụ na Jenụwarị 23, afọ 2015
Mgbe ndị ọchịchị nyechara ikike ka a malite ọrụ, ndị ọrụ malitere ibupụsi osisi ndị e gbuturu egbutu ka a hụ ebe a ga-arụ ọrụ. Ha gbara mbọ hụ na ha rụchara ọrụ ahụ tupu oge nnụnụ ji arụ akwụ́ eruo. A wụsara iberibe osisi ndị si n’osisi ndị ahụ e gbuturu n’ụzọ ka ndị ji ụkwụ na-esi na ya agafe. A ga-ejikwa osisi ndị ahụ rụọ ọrụ mgbe a na-arụ alaka ụlọ ọrụ a.
Ihe a rụrụ na Jenụwarị 30, afọ 2015, n’ebe ndị ọrụ ga na-anọ eri nri
Ebe onye na-arụzi ọkụ na-arụnye ebe a ga-akwụnye waya tiivi n’ebe bụ́bu họtel. E jizi ya mere ebe a ga na-esi nri na ebe a ga-anọ na-eri nri. Tiivi ndị a ga-enwe ebe ahụ ga-eme ka ndị ọrụ na-ahụ ihe ndị a na-eme, na-anụkwa ihe ndị a na-ekwu mgbe ndị ezinụlọ betel na-agụ ihe mmụta dịịrị ụbọchị na mgbe ha na-enwe ọmụmụ ihe Ụlọ Nche.
Ihe a rụrụ na Febụwarị 23, afọ 2015, n’ebe a na-arụ alaka ụlọ ọrụ
Ihe a bụ ebe ndị ọrụ na-agba ụfọdụ ebe a ga-arụ ụlọ n’alaka ụlọ ọrụ a ogige. A ga-emecha gbaa ọtụtụ ebe n’ala a ogige. Ebe ọ bụ na ebe ahụ ka na-emepe emepe, a gbara mbọ hụ na ọrụ ndị a ga-arụ agaghị akpacha ụmụ anụmanụ ndị e nwere ebe ahụ aka ọjọọ. Dị ka ihe atụ, a dọkwasịrị ihe e ji gbaa ogige ahụ n’elu osisi a tọrọ n’ala ka e nwee ohere n’okpuru ya ebe ihe dị ka ewi na ebi ga-esi na-agafe ma ha kpagharịwa n’abalị.
Mgbe a na-arụ ụzọ ndị ọrụ ga na-esi n’ebe ha bi aga ebe a na-arụ ụlọ dị iche iche a ga-enwe n’alaka ụlọ ọrụ a. A ga-emecha mechie ya.
Ihe a rụrụ na Mach 5, afọ 2015, n’ebe a na-arụ alaka ụlọ ọrụ
Ihe a bụ mgbe a rụchara ụzọ a dị n’aka nri. Ị ga-esi n’ụzọ a aga ebe a na-arụ ụlọ ndị a ga-enwe n’alaka ụlọ ọrụ a. Ụlọ ndị a dị́ n’ala ala aka ekpe bụ ebe ndị ọrụ ga-ebi. A ga-arụkwu ụlọ ndị ọrụ ga-ebi n’akụkụ ya.
Ihe ndị e mere na Eprel 20, afọ 2015, n’ebe ndị ọrụ ga-ebi
Mgbe onye só n’Òtù Na-achi Isi nke Ndịàmà Jehova na onye na-anọchite anya isi ụlọ ọrụ anyị letara ndị na-arụ alaka ụlọ ọrụ a. E mechara nwee nzukọ pụrụ iche n’izu ahụ. Ndịàmà Jehova nọ́ na Briten na Ayaland nọ n’Ụlọ Nzukọ Alaeze ha dị iche iche gee ihe a na-ekwu, hụkwa ihe a na-eme. A gwara ha ụnyaahụ ya na ndị ọchịchị obodo Kelmsfọd kwuru ka ha bidogodị ọrụ.
Ihe a rụrụ na Mee 13, afọ 2015, n’ebe a ga-eji mere ọfis na ebe a ga-adọwa ngwá ọrụ
Ebe ndị ọrụ na-atọ ihe dị ka ígwè n’ala n’agbata nnukwu osisi oak abụọ. Ndị ọrụ ga na-esi ebe a aga ebe a ga-arụ ụlọ ndị a ga-enwe n’alaka ụlọ ọrụ a. Ihe a a na-atọ n’ala ga-eme ka nnukwu ụgbọala ghara imebi mgbọrọgwụ osisi mgbe ha na-agafe.
Ihe a rụrụ na Mee 21, afọ 2015, n’ebe ndị ọrụ ga-ebi
Ihe a bụ mgbe ndị ọrụ na-egwu ebe ha ga-eli waya ọkụ a ga-eji dọbata ọkụ n’ụlọ obibi ndị a ga-emecha kụtuo. Ụlọ ndị ị na-ahụ ebe a bụ ndị mbụ n’ime ụlọ iri ise ndị ọrụ ga-ebi na ha mgbe ọrụ biiri ọkụ.
Ihe a rụrụ na Jun 16, afọ 2015, n’ebe ndị ọrụ ga-ebi
Ebe onye plọmba na-etinye paịpụ mmiri n’otu n’ime ụlọ ndị ọrụ ga-ebi nwa mgbe.
Ụlọ ndị a dị́ n’aka nri bụ ụlọ ndị a rụrụ ọhụrụ ndị ọrụ ga-ebi na ha. Ntọala ndị a ị na-ahụ bụ ebe a ga-arụkwu ụlọ obibi. Ụlọ ndị nke dị n’aka ekpe bụkwa ụlọ ndị ọrụ ga-ebi, ebe a ga na-eri nri dịkwa na ya. A ga-arụ alaka ụlọ ọhụrụ a na mbara ala ahụ ahịhịa ya na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nakwa odo odo.
Ebe onye ọrụ na-ejikọta waya na waya n’ụlọ nzipụ ozi. A chọrọ ka e nwee Ịntanet na ihe ndị ọzọ ndị ọrụ ga-eji na-ezirịta ozi mgbe ọrụ ga-amalite. Ha na ndị nọ n’alaka ụlọ ọrụ ndị ọzọ na ndị nọ n’isi ụlọ ọrụ anyị ga-ejikwa ya na-ezirịta ozi.
Ihe a rụrụ na Julaị 6, afọ 2015, n’ebe a ga-arụ alaka ụlọ ọrụ
Ebe onye ọrụ ngo ji ígwè e ji amata ebe ihe dị na-achọ ebe ndị e gwuru olulu. Olulu ndị ahụ ga-enyere ndị na-amụ banyere ihe ndị mgbe ochie aka ịmata otú ebe ahụ dị tupụ ọrụ ebido. Ọ bụ eziokwu na ndị Rom oge ochie biri n’obodo Kemsfọd dị́ nso n’ala a, ma ka ọ dị ugbu a, a chọpụtabeghị ihe ndị mgbe ochie n’otu narị olulu na asaa ndị ahụ e gwurula egwu.
Ihe a rụrụ na Julaị 6, afọ 2015, n’ebe a ga-eji mere ọfis na ebe a ga-adọwa ngwá ọrụ
Mgbe onye ọrụ na-akwọbi ihe e ji arụ awara ụzọ. A na-emezi ụfọdụ ụlọ ndị e nwere n’ebe a ka a nọrọ na ha na-arụzi ihe ụfọdụ. A ga-ejikwa ụfọdụ ebe mere ọfis na ebe a ga-anọ na-eme ihe ndị ga-eme ka ọrụ na-aga aga. A ga-anọ na ha na-arụ ọrụ ruo oge ụfọdụ
Ebe onye ọrụ ji katapila na-ekponye ájá na tipa a ga-eji ekpochi ihe.
Ihe e mere na Julaị 7, afọ 2015, n’ebe a ga-arụ alaka ụlọ ọrụ
Foto a na-egosi ala alaka ụlọ ọrụ a a chọrọ ịrụ nakwa ala ndị ọzọ nọ ya nso. A nọ n’ebe ndịda ala a see ya. Ala alaka ụlọ ọrụ a dị hekta iri atọ na anọ. E nwere ụzọ na-adịghị na foto a dị́ nso n’ala a, nke e si na ya aga ọdụ ụgbọ mmiri, ọdụ ụgbọelu nakwa Lọndọn.
Ihe a rụrụ na Julaị 23, afọ 2015, n’ebe a ga-arụ alaka ụlọ ọrụ
Ebe ndị ọrụ ngo na-akwatu ụlọ ndị dị n’ebe a chọrọ ịrụ alaka ụlọ ọrụ.
Ihe a rụrụ n’Ọgọst 20, afọ 2015, n’ebe a ga-eji mere ọfis na ebe a ga-adọwa ngwá ọrụ
Mgbe nnukwu kren na-adọkwasị ahụ́ ụlọ n’ogidi a rụrụla arụ. Ala ndị a dị ebe a bụ ebe a ga-arụ ụlọ ndị ọzọ. A ga-anọ na ha na-ahazi ọrụ ndị a na-arụ.